၂သစ်အကျွေးအမွေး Water Pita | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Community & Society » ၂သစ်အကျွေးအမွေး Water Pita	12
၂သစ်အကျွေးအမွေး Water Pita
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Apr 17, 2015 in Community & Society, Food, Drink & Recipes | 12 comments
ဝေါ်ထဖာထီ ယေဖာထီ အေ့… ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသား သင်္ကြန်တွင်း ခေတ်စားတယ်။ ဝေါ်ထဆိုတာ ရေ..၊ ပါတီဆိုတာ ပီတာ.. Pita ဆိုတာ နံပြားလို မီးဖုတ်ထားတဲ့ ဂျုံပြား ဖြစ်တာမို့ နှစ်သစ်အခါ သမယမှာ ရွာဓါးများကို ရေတဖန်ခွက်နဲ့ ပီတာပေါင်မုန့်ပြားမီးဖုတ် ကျွေးပါဒရယ်။ ဆားဂျပါစ်……
ပီတာနံပြား ဒီမှာစံစား ဖီလာမာန်ကြွား ဇီဇာချန်ထား
ခင်ဇော် says: အာ့ဆို ဗိုက်ပွပြီး ကျန်တာ ဘာမှ မစားနိုင်ပဲ နေတော့မယ်။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ပလာတီ ဆိုတာလည်းအပြား
♪ ♪ အို ပလာတီး အိုပလာတား ♪ ♪ ♪
ဦးကျောက်ခဲ says: ၂သစ်မှာ ဂွဇက် ကြက်သွားရည်ဆောင် မောင်ကြွတ်ကို…
အသီး (လက်သီး) အရွက် (စာရွက်) အသား (သစ်သား) ငါး (ငါးပူတင်း)
အဖျော် (ဘိလပ်မြေ ရေဖျော်) ယမကာ (မီသနော) တွေနဲ့ ဧည့်ခံပါရစေ…
ပြီးရင် ပုဇွန်တောင်ချောင်းမှာ ခေါင်းလျှော်ပေးမယ် … ခွိ ခွိ
naywoon ni says: ​ရေတစ်​ဖန်​ခွက်​နဲ့လား ဘီရာ တစ်​ခွက်​နဲ့ဆိုနဲနဲ​တော်​​သေးဒယ်​ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: အာ့ကြောင်ရီးဂို ဖာထီ… အဲလေ.. ပါတီထောင်ခိုင်းတဲ့ နမိတ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1880
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: ဘယ်တုန်းက ဘယ်လောက်ထိ အဲ့လောက်.. စေဒနာရှိသွားတာလဲ..
မောင်ကြွတ်စ်.. မွှတ်စ်ကြောင်… ဒုတ်ပြောင်…. မုန့်ဆောင်…။ ။ :cool:
uncle gyi says: ရေနဲ့ဂျုံ နဲ့ဗိုက်ကိုဆာစရာအကြောင်းမရှိတော့
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဒီသင်္ကြန် ဘာမှ မသောက်လိုက်ရဘူး…
မြစပဲရိုး says: “ပီတာ” ဆိုတာ ဖခင် ဟဲ့ ကြောင်ကြောင် ရဲ့။
သို့ပေမဲ့ ရေ နဲ့ ဖခင် ကို ဘယ်လို ဆက်ပေးရမယ် တော့ မသိ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ကြောင်စာထင်တယ်။
ဂေါ်ဇီလာကြောင်ဖြစ်ရမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Alinn Z says: .ဖွေးဖွေးနဲ့ ဆင်တဲ့အစားအစာ မရှိဘူးလား
ပလပ် ပလပ် ပြပ် ပြပ်
Mike says: .မွတ်ကြောင် ကျွေးတာဆိုဒေါ့ မွတ်စာပေါ့
.မွတ်စာ ဆိုဒေါ့ မာစွတ်..ယာကွတ်..လာဗျွတ်..စာရွတ်..ဏှာချွတ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.